I-Amazfit GTS 2e ne-GTR 2e - $ 115 Smartwatch | TeraNews.net
I-Amazfit GTS 2e ne-GTR 2e - ama-smartwatches wama- $ 115
umbhali UKravetz Pavel Kushicilelwe ku 28.12.2020
Inkampani yaseChina iHuami isimemezele ngokusemthethweni ukuqala kokuthengiswa kwamawashi ahlakaniphile we-Amazfit GTS 2e nochungechunge lwe-GTR 2e. Intengo yamagajethi ngama- $ 115 eChina. Ngokunikezwa kokusebenza okuningana nokubukeka okubizayo, izindleko ziyabiza kakhulu.
I-Amazfit GTS 2e ne-GTR 2e - amawashi ahlakaniphile
Isikrini se-AMOLED, izinga lokushaya kwenhliziyo nokuqapha ukulala, ukutholwa kwe-oxygen oxygen saturation. Kunzima ukucabanga i-smartwatch ngaphandle kokusebenza okunjalo. Kepha imikhiqizo emisha inobuchwepheshe obusha - ukuthola izinga lokushisa. I-thermometer eyakhelwe ngaphakathi ifunwa ngabasebenzisi abaningi. I-Amazfit GTS 2e ne-GTR 2e zinesamukeli se-GPS nemodyuli ye-Wi-Fi. Kukhona ukuvikeleka ekucwilisweni okwesikhashana emanzini (5 ATM). Ukuzimela kwe-Amazfit GTS 2e - izinsuku eziyi-14, i-Amazfit GTR 2e - izinsuku ezingama-24.
Ngaphezu kwemisebenzi efunwayo, ama-smartwatches abukeka kahle kakhulu. Ngisho kuyabiza. Umzimba wensimbi oyisitayela kanye nebhande elilungele ukushintshana lingeza ubucayi kwigajethi ye-Amazfit. Ngokwakhiwa, i-GTR 2e inecala eliyindilinga (elifana newashi I-Amazfit GTR 2)kanti i-GTS 2e ingunxande.
ICasio G-Shock GSW-H1000-1 - Ukubuka okuhlakaniphile
I-Huawei Watch 3 ne-Watch GT 3 zithembisa ama-smartwatches amakhulu
Velomobile Twike 5 - ukushesha kuze kufike ku-200 km ngehora
Isipho esihle somgibeli wamabhayisikili - WEST BIKING